Yedivayisi amandla-bonge. Kungakanani iyona ugesi? Kwagezi ubuchwepheshe
Kukholakala ukuthi eRussia ugesi engabizi. Futhi ngenxa yokuthi isikhathi eside, futhi ibhizinisi noma abantu musa unake okukhethekile kulondolozwa ugesi. Izizathu, ukukhuluma ngendlela efanele, lokhu - ezweni lethu, cishe bengcono kakhulu emhlabeni ugesi uhlelo, kukhona inani elikhulu izitshalo kwamandla, ukulawula eziphambili ngenethiwekhi amandla wokusabalalisa. Konke lokhu kusivumela ugesi ezishibhile emazweni amaningi athuthukile.
Kodwa izinga lokwehla kwamandla emali akemi namanje - futhi manje amanani kunalokho enkulu. Izifushaniso of nesidingo sokwenza ngcono ukusebenza kahle energy kuxoxwa ezingeni zikahulumeni. Kuyadingeka ukuba ugcine ugesi futhi izakhamuzi futhi ibhizinisi. Umbuzo uwukuthi indlela engcono yokwenza lokhu, idivayisi yokulondoloza kagesi ugesi ekhaya noma kwenye imboni.
Okokuqala, ake sixoxe ngalokho izinketho ukonga ugesi emakhaya nasezibhedlela amakamelo. Bese udlulela kuhle kwegezi emkhakheni wezamabhizinisi.
Ngakho, umnikazi efulethini, ngubani inomsebenzi wokuqala - ukonga ugesi isikimu kwaba.
Ukushintsha ama-globe kagesi
Enye yezindlela eziphumelela kakhulu futhi ezingabizi ukonga ugesi ekhaya - esikhundleni incandescent amalambu nge ngaphezulu yesimanje (LED, Fluorescent noma Halogen). Ngokwesilinganiso, imali afinyelela izikhathi 5-6. Ezinye izinhlobo izibani yesimanje zibekelwe isikhathi esithile eside kuqhathaniswa imikhiqizo ezivamile (tandla emahlandla la -10).
Sibheka isigaba kuhle kwegezi
Lapho uthenga zikagesi ezintsha (ikakhulukazi labo izinhlobo abe eliphezulu kakhulu amandla ukusetshenziswa - imishini yokuwasha, isibonelo) kudingeka sibheke, yiziphi ethize imodeli ngezimiso (isigaba) amandla. Uma sithatha "stiralki" efanayo - isigaba A ++ amadivaysi amandla cishe amaphesenti angu-20 esebenza kahle kunalawo ezikubhizinisi A-class.
Sebenzisa esiqandisini ngokuhlakanipha
Emikhayeni eminingi uhlobo kakhulu ugesi esiningi ekhaya Imishini - esiqandisini. Omunye eqolo ngokuya izinqubo amandla - inqubo ukuqanda incibilikiswa. Uma esiqandisini isethelwe Ayikho Frost ke lokhu akudingekile, futhi ngenxa yalokho kudivayisi okunjalo kuyoba kusebentisa emandla agezi ngalokuyimphumelelo kuka ezenzakalelayo ezivamile. Seziqa Ayikho Frost - kwayona idivayisi enkulu ukulondoloza amandla.
Esiqandisini kufanele zitholakale kude insimbi, elivela ukushisa (ngokukhethekile, kusuka Ukushisa imbobo). Engathandeki zinikeza esiqandisini amakhabethe kanye ukudala umngcingo lapho emoyeni neze ukhiphela. It is hhayi Kunconywa ukubeka namanje hot kusukela ukudla odlule kuwo.
Cover silondoloza kilowatts
Eqinisweni abathandwayo. Lapho ku-amanzi kagesi abilisiwe ngaphandle ikhava - walahlekelwa eziningi ukushisa, okwenza idivayisi kufanele uthole lokhu ukuvuza ngenxa kagesi. Yingakho omunye kukho ngempumelelo ukonga ugesi - amanzi ngamathumba on isitofu ngokuvala isivalo imbiza.
Ngokweqile noma underload - ukulahlekelwa
Manje ngenxa imishini yokuwasha. Izinga eliphakeme kuhle kwegezi kufinyelelwa kulezi kumadivayisi angu elikhulu ukulayisha ilondolo (ngokuvumelana ngemibhalo yomsebenzi). Uma umshini ongama 5 kg - kuba lokungapheleli okunengi kangaka, kudingeka download for ukugeza ngamunye. Uma izingubo zakho akuyona elibanzi kudinga sifakwe emanzini - engavumi kuye. Uma izingubo akuzona ezingcolile - ungathola aphansi-lokushisa Imodi (30-35 degrees).
Ngokuphumelelayo likhanyisa Igumbi
izibani ngangokunokwenzeka emakamelweni nezinye izikhala ophilayo kumele kusetshenziswe focus zendawo - sconces, izibani phansi. Kungcono ukunikeza wonke amagumbi olulodwa egumbini isibani - kusihlwa ukufunda, ayina. Hlanganisa Iqhwa kunengqondo kuphela uma kubalulekile ukuza noma ukwenza yokuhlanza. Kodwa cishe njalo ukukhanyisa jikelele ungayithola enye emapheshana kahle LED zazo wahlela azungezwe izindonga noma ophahleni. Bona, ngaphezu kwalokho, uzokwenza egumbini ukubukeka stylish ngaphezulu.
Kettle - inkomishi
Imodi ukonga kakhulu wokusebenza nge i yokucela kagesi - ubilise kuphela yamanzi ivolumu kunesidingo. Thela capacitance kudivayisi futhi ubilise ngokuphelele ngakho kungcono uma etafuleni ihlala umndeni noma ukuza. Kufanele kuqashelwe - iketela amathumba ngamanzi ne enkulu energy nekghono kuka plate.
Inqubo ayina is best yahlukaniswa ngezigaba ezintathu. On the lokuqala (ngokushesha ngemva yensimbi) - ironed izinto akudingeki okushisa aphezulu (ezifana amaduku, imikhiqizo uboya). On the yesibili (njengoba nje insimbi heats - ngokuvamile lapho ukukhanya iyavala kuye) - lezo kuphela kahle otglazhivayutsya ngensimbi eshisayo (shirts, ibhulukwe). Isinyathelo sesithathu iwukuba ukuvala insimbi kusukela izisekelo kanye dogladit kwezinye izinto kukhona eduze izici amasokisi noboya.
Ukuphathwa Energy Isikhathi
Ngo lamadolobha amaningi aseRussia kukhona okuthiwa ebusuku ugesi yamanani (ngokuvamile eshibhile 30-40% ngaphandle emini). Kunengqondo ukusebenzisa lolu, futhi zihlanganisa, isibonelo, umshini wokuwasha, multivarku (futhi uma kunokwenzeka - namanye amadivayisi) ukulondoloza elektroenerii ngesikhathi amahora uma la manani esebenzayo kuphela. Ezinye izinhlobo amadivaysi ngokuphelele bazivumelanisa le njongo. Ngokwesibonelo, cishe yonke imishini yesimanje kanye izitofu anemisila imisiwe isiqalo Imodi - isikhathi esiqondile kuqale wokuwasha noma ukupheka lingacushwa.
Savings - kokubili kuskrini
TV nekhompyutha, ukusebenza kwimodi itoho, kwasemuva, kudle amandla kakhulu esingaphansi ukukhanya ngokugcwele asebenzayo. Savings okungenani 5%. Ngakho-ke, uma kungenzeka, udinga ukunika amandla kule modi. Ngokulinganiswa amakhompyutha "ukulala" futhi "eceleni" izindlela yasungulwa ngesizathu esithile. Phakathi ugesi ukusetshenziswa idivayisi kuyehla kube sezingeni eliphansi.
Ngokumangalisayo, esinye zikagesi kakhulu amandla okudla in the amafulethi yesimanje Russian kuyinto ishaja yedivayisi yefoni (smartphone, tablet). Lokhu kwenzeke yize inani elincane amandla (mayelana 5-10 Watts). Into wukuthi abanikazi kuthiwa njalo wangazinaka kudivayisi socket. Ngakho lezi nesizotha 5-10 Watts waphawuleka ngokuphelele ekupheleni kwenyanga "umoya" ubungako bamandla, okungafaniswa sokudliwa Chandeliers. Kuyadingeka ukuba cisha ishaja ukonga ugesi.
Nokuhlanza - wezindlu ehlanzekile cleaner
Cleaner wezindlu nge ahlanzekile, uphawu uthuli ngalendoda usebenza mayelana 40% kahle ngokuya amandla kunaleyo kabani ithangi kahle avimbekile noma has ufa. 40% kusukela 1500-2000 Watts (njengoba ngokwesilinganiso kudle-vacuum cleaner omkhathi) - ke ifaniswe ne inani "umoya" zonke izibani efakwe kule efulethini.
Usayizi pan inenani
Uma isitofu wafaka izitsha, phansi lapho ubukhulu esokuba kuvumelana Usayizi izitofu, luyokwandisa songa amandla inqubo ukupheka nge 5-10% uma iqhathaniswa imodi lapho umgwaqo amabhodwe namapani kuyinto "okungahleliwe". Kubalulekile futhi ukuba phansi izitsha uyisicaba. Elinye isu: kanye amanzi abilisiwe, kubalulekile ukuba ngokushesha ukushintshela kusuka lokushisa ongaphakeme imodi okusindisa (Ukushisa ngenhla degrees 100 engakwazi ukuya - ngeke kuphela shabalala amanzi namandla - wachitha).
Kwagezi ekhaya: nobuchwepheshe obuphambili bezokuphepha
Abanikazi amafulethi yesimanje Russian ungakwazi ukujabulela ezihlukahlukene amadivaysi, okuvumela ukonga ugesi. ethandwa kakhulu, e dimmers ethile (dimmers obizwa nangokuthi).
Lezi amadivayisi efakwe esikhundleni circuit-oluseduze. Basiza ngokushelela ulungise ukukhanya ezingeni yokukhanya (amadivayisi ukukhwezwa Izilawuli voltage isetshenziswa voltage isibani). Uma, yithi, egumbini efakwe izibani 100-watt, le dimmer ivumela isimo "ukuguqula" kubo singene-watt 30. Noma, uthi, 80-watt. Dimmer - idivayisi ukulondoloza amandla, okuyinto libuyekeza ukuchaza lokhu okusungulile njengendlela kakhulu zobuchwepheshe.
Lonke iqiniso mayelana diodes ukukhanya-likhipha
LED - elementi agesi uyakwazi odala notshwala yokukhanya, usebenzisa amandla amancane kakhulu wamanje kuka ezivamile incandescent isibani. Isibani LED - kule divayisi ukuze kulondolozwe amandla, okuyinto libuyekeza efanele, omuhle kakhulu.
Umbuzo oyinhloko ukuthi izithakazelo abathengi Russian - angaphezu ukuthi ukonga real lapho ngokuzimisela bafaka izibani amadivayisi esekelwe LED? Ngokwazi ukuthi kuyinto palpable? Ongoti, hhayi ukuba okungenasisekelo, ngokuvamile sithethelela izinzuzo LED ngakho.
Ukugeleza ukukhanya kukalwa amayunithi ekhethekile - lumens. Ezivamile esikhipha isibani ukhiqiza cishe 14 lumens ngayinye 1 watt wamandla kagesi ibusa. Fluorescent isibani energy esisindisa - mayelana 61 lumens. LED - mayelana 100 Ngakho luyingxenye ngobuchwepheshe kule divayisi Bypasses "izimbangi" zawo ezingokwesiko.
Zama ukusebenza ngezinombolo. Thatha isilinganiso emakethe luminaire, lapho isethi izibani energy-saving 5. Ngonyaka, ibusa kilowatts mayelana 330 (uma ivuliwe amahora angu-12 ngosuku). Ake sithi kilowatt izindleko 5 ruble (ithi ncamashi kangakanani ugesi eRussia ngokwesilinganiso, kunzima, omkhulu kakhulu, regionalization yamanani). Khona-ke umninindlu uzokhokha ruble 1650. Manje thina ukwenza izibalo ngokuba izibani LED. Kuvele kusebenta maqondana lumens watt ngasinye (61 kuya ku-100), imali ruble cishe 1000. Futhi lokhu isibani eyodwa kuphela, okuyinto indlu ingase ibe eziningana.
Lokho mayelana ubukeka LED wesifunda.
Ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo LED Ubuchwepheshe kuyaqondakala: kuyilapho ama esikhipha ukuguqula iphesenti enkulu kagesi ku ukushisa (isibani ashisayo futhi kungani), LED cishe ngokuphelele iguqula ugesi ningene ekukhanyeni.
Uma sisebenzisa ama LED, kwagezi - hhayi kuphela inzuzo lezi amadivaysi. Phakathi kwezinye izinzuzo LED - ukuphila isikhathi eside (cishe izikhathi ezingu-50 isikhathi eside kunaleso ama esikhipha). Kulezi zinhlobo ukukhanyisa cishe akukho izinto eziyingozi (ngesikhathi izibani eziningi energy esisindisa babe mercury). LED ngokuphelele amenable ukuba ukulungiswa yokukhanya (usebenzisa dimmers efanayo). Abaningi izinhlobo izibani Fluorescent usebenze mode ushintsho bushelelezi ku ezingeni lamanje ukunikezela bengayi. LED cishe musa ukulotha, musa blink futhi akazange behluleka ngaphansi kuyaqhubeka. izibani fluorescent njengoba miphumela kukhona isici. LED ngokugcwele amandla ukukhanya ekushayweni acishe kweso. izibani fluorescent ngokuvamile ukuchitha at imizuzwana ke ezimbalwa. Futhi uma izinga lokushisa endlini iphansi - futhi ngezinye izikhathi imizuzu.
LED ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana zokukhanya okusondele kakhulu ukuba bohlu solar kuka isibani sikagesi. Lokhu kuyabonakala noma ngeso lenyama. Kwanele ukubona ukuthi izinto zibukeka egumbini zikhanyiswa izinhlobo ezahlukene amadivaysi. LED abe kunalelo Inkomba okuthiwa yokudlulisela ukukhanya (noma CRI).
Ukuze kulendawo eziningi ababaluleke isikhala lokho "umbala" zaveza egumbini lapho yokufakelwa ukukhanya umthombo - efudumele, hlangothi noma abandayo. Endabeni izibani Fluorescent ingacosha idivayisi olukwazi ukukhanya imodi lokuqala noma lesibili. Izibani efudumele (yellow) amathoni kukhona umbala lokushisa 2700 Kelvin. Nge kokungathathi hlangothi (omhlophe) - 5000, unomkhuhlane (tint okwesibhakabhaka) - 6500. Ngokufanayo, ithuba efanayo ukunikeza futhi LED. Kulokhu zingabantu - a esikhundleni ephelele izibani energy-saving. Ngaphezu kwalokho, lezi amadivaysi ngokwawo engase angakhiqizi ukukhiqiza ezihlukahlukene imibala.
LED musa zishe, ngokungafani nezinye izinhlobo izibani. Kuyo yonke le minyaka, bangase kuphela ukuthi ulahlekelwe ngeminye izakhiwo umthengi, kodwa kakhulu ngokushelela futhi cishe kungabonakali ngoba umnikazi.
The main counterargument nezitha ukusetshenziswa LED - amanani entengo aphezulu mishini. Ngokwezinga elithile lokhu kuyiqiniso. LED ayabiza kunamawashi incandescent ama kanye nozakwabo eyonga amandla. Kodwa umehluko akuyona ezifana kwaba seminyakeni embalwa edlule, lapho LED woza kuphela emakethe - njengoba babenaso eshibhile kakhulu. Cabangela isibonelo esilula, okungase kuboniswe abagxeki.
Mhlophe komlilo isibani (60 Watt) kubiza ruble angu-30.
Amandla fluorescent (Ukukhishwa okufanayo ecucuza elikhanyayo, izingilazi mayelana 12 Watts) - ruble 150.
LED (odala okufanayo umfutho ukukhanya, izingilazi 5 Watts) - ruble 500.
Kungakanani iyona ugesi e isibonelo sethu? Thatha icala lapho intengo kilowatt - ruble 3 (cishe - eMoscow). Ukukhanyisa emakhaya Russian (Chandeliers, izibani phansi) asetshenziswa amahora 8-10 ngosuku. Kulinganiselwa ukuthi ngonyaka, ngakho isibani uyozishisa amahora 2920-3650.
Uma zalapho ukukhanyisa kukhona ama esikhipha, ziyoshwabadela (uphindaphinde inombolo yonyaka amahora phezu wattage) 175-219 kilowatts. Fluorescent - 35-44 kW. LED - 14-19 kilowatts.
Lo mthethosivivinywa okukhanyisa usebenzisa isibani - 525-657 deda.
Ukusebenzisa isibani sikagesi, umnikazi uzokhokha ruble 105-132.
Nge LED - ruble 44-57.
Kuqhathaniswa ngesibani esikhipha LED okhokhela ngokwayo onyakeni wokuqala. Abagxeki khona oyothi: "Yini mayelana nomkhiqizo Fluorescent?" Ukulondoloza lutho Imininingwane. Ngakolunye uhlangothi, kuba - ruble 60 umehluko LED uzokhokha for ngokwalo eminyakeni 8. Kodwa ukubheka yisikhathi: kusukela Fluorescent isibani isilinganiso - ayizinkulungwane 10 amahora (3 iminyaka), ngenkathi LED - (engaba ngu-15) ayizinkulungwane 50 ... It kuvela ukuthi emva kweminyaka 10 umnikazi ngeke ukutshala ukuthengwa izibani ezintsha Fluorescent kakhulu ngendlela e LED. Kodwa lokhu ngaphandle ikhumbula ukonga net ugesi, zabasebenzi ngoba esikhundleni izibani kanye nezinzuzo tebuciko - ngenhla sishilo ukuthi ukukhanya LED is closer kuze kwelanga.
Igcina ugesi kule mboni
Njengoba sesifunde ongakhetha lokulondoloza ugesi in the amafulethi, siphendukela endaweni yebhizinisi. Amandla esisindisa ubuchwepheshe - yindlela yokuhlola ukhiye ukuze kube nokuncintisana nokwakha yenkampani kanye ukuzinza yebhizinisi. Lapha zonke ruble ibala. Yini izinkampani Russian ninezinto ukonga ugesi?
Into yokuqala okufanele niyenze ukubeka ngangokunokwenzeka ngqo usuku zokubala - energy-saving ubuchwepheshe ucala ezingeni izibalo, isabelo sezimali izindleko ugesi.
Phakathi izinto okumelwe zize kuqala esigabeni esilandelayo umsebenzi ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo - ukuthenga inverters. Lezi amadivayisi enze kube nokwenzeka ukuba yenza uhlelo ezinkampani ugesi ukuze izinhlobo ngazinye imishini ukuthi kungaba ngcono ukukhiqiza futhi yabo kahle. Imvamisa Converter - idivayisi yokulondoloza kagesi amandla izilinganiso zazo zibonisa isithakazelo esikhulu kulo mkhankaso ezisunguliwe ezifana by yezinkampani Russian.
Ozimele bebelokhu baziwa ngokuphakamisa ukuxazulula konke. Kusemqoka ukuthuthukisa nekusebenta ukusetshenziswa kukagesi kuleli ibhizinisi wahlanganyela yimuphi umuntu obhekene (noma amaqembu abasebenzi). Ngezinye izikhathi igama lokhu okuthunyelwe kuzwakala "Lubhekele umkhakha kagesi." Imisebenzi esemqoka uchwepheshe kukhona ukunikeza kwebhizinisi izixazululo eziphambili zobuchwepheshe emkhakheni ukonga ugesi, ukugcinwa imishini uthenge, ukulawula ukulungisa kanye nomsebenzi wesondlo, ngesikhathi esifanele imishini uphethwe. Futhi, umsebenzi onguchwepheshe ingase ihlanganise ukuthuthukisa wokusebenza ukufunda izinto eziyisisekelo inkampani amandla kwemvelo. Ukusiza accountant uchwepheshe ingathunyelwa, okuyinto nihlela izinkokhelo zokuthengwa kukagesi manje, qhubeka izibalo ku izindleko energy.
Lubhekele kagesi umkhakha isisebenzi zingase futhi zibe nezimiso eziqondile, owawuthi ngeke lidlule yi Imininingwane amandla ukusetshenziswa yenkathi enikeziwe (isib, ngenyanga). Ingase futhi ubambe imicimbi ezinkampani lokwenza igezi yanele - abasebenzi yokwaziswa, umhlangano. Uma, yithi, kukhona umthamo ngokweqile (ngaphandle kwemvume nokuvunywa ukuphathwa noma omunye umsebenzi ofanele) Khona-ke, njengoba nakuyicabanga, izindleko yayiyobizwa offset i-premium ingxenye yemiholo izisebenzi. Yikuphi ukwakhiwa ingahle iziqondiso? Ngokwesibonelo, iinthombe inadmissibility ka kokukhanyisa amandla anjalo, uma izizathu inhloso, iqiniso liwukuthi ngeke.
Ngu Isifaniso ne songa amandla esihamba amafulethi nezindlu kungenziwa enikeziwe (lapho kungenzeka khona) Fluorescent noma izibani LED.
Iyiphi idivayisi ukulondoloza amandla angabakhulula inhlangano? A option ewusizo - ukufakwa kwe-RCD (asalile kudivayisi lamanje) abe ingxenye yesimiso ugesi wenkampani. Asinakusho ukuthi idivaysi ephelele ukulondoloza amandla. Kodwa ikuvumela ukuba kuncishiswe amathuba ukuvuza kagesi e wiring. Kuyasiza futhi ufake futhi SCP (amadivayisi isiqalo esithambile). Njengoba inketho - ngokuhlanganyela RCD. Kungaba kubhekwe yena, ukuthi upp - yidivayisi ezikhethekile ukulondoloza amandla. It ikuvumela ukusebenzisa imishini industrial, ekunciphiseni amathuba okweqile izinjini efakwe kuwo, ukufaka abahamba phambili ngokuya ngezinqubomgomo amandla ukusetshenziswa operation mode.
Ngaphambi usacabanga ukuthenga kwenye idivayisi ezibizayo ukulondoloza amandla ibhizinisi, kudingeka ubone ukuthi imithombo kungukuthi kuhlobane ngokuqondile ubuchwepheshe okusezingeni eliphezulu abathintekayo. Kunalokho, ngezinye izikhathi ithuba ugcine ugesi, bathi, amanga phezu. Akunandaba imishini kangakanani, okuyinto idayagramu zedivayisi kudingeka onge amandla, iziphi ezicashile ukufakwa kanye nokusebenza. Isibonelo elula: ukwenza ngcono ukusebenza kahle amandla Ungakwazi ukupenda izindonga, Uphahla lwangaphakathi kanye phansi amahhovisi kanye ukukhiqizwa izindawo ngemibala egqamile. Lokhu kuyonciphisa imvamisa kwesibani ivuliwe uma mgwaqo okungenani kusihlwa noma ekuseni kakhulu kwelanga cishe asikho isidingo, uma ukukhanya - emini. Esakhuluma ngayo le ndaba, udinga kuye asekelayo Amahhovisi ibhokisi kanye izakhiwo zezimboni ahlanzekile. Ochwepheshe ngokuthi sibalo 5-10% - ukonga ngenxa ekhanyayo. Njengoba ubona, azikho izimali amadivayisi ezibizayo, kodwa umphumela.
Kungenzeka ukuba asebenzise uhlelo elawula ngokuzenzakalela kumadivayisi ukukhanyisa (khona izinzwa, udlulisela, nokunye. D.).
Asikho isidingo ukusindisa on izimali ezintsha Ihluzo Elingafaki Ukuqoka futhi imishini industrial. Kufanele kuqondwe ukuthi ingxenye enkulu brand omhlaba anothile ehola ukuthuthukiswa izimakethe emazweni nge ugesi eqolo. ERussia, njengoba sazi, ugesi, sibonga iziteshi kuhlanganiswe amandla nokwahlukana kwabo (kukhona zenuzi, Hydro, ezishisayo izitshalo amandla), ezishibhile emazweni amaningi aseNtshonalanga. Kuyadingeka ukuqapha emakethe ezenzekayo yesimanje emkhakheni ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo.
Kuyadingeka ukwenza imithetho okuzohlolwa ngayo namahhovisi kwabasebenzi kufanele asebenzise amakhompyutha. Kungaqukatha, isibonelo, imiyalelo efana:
- uma udinga ukuhambisa kude emsebenzini - ukubeka ikhompyutha yakho ku "ukulala" Imodi, kokuvala qapha;
- Ngaso sonke isikhathi vala imishini yokukopisha, iphrinta futhi isithwebuli, uma ayisetshenziselwa (kusukela ngisho kumodi yokulinda, lezi izinhlobo ehhovisi zikagesi kudle amandla);
- ukungafaki kungekho inhloso isidingo emoyeni conditioners, heater.
Igcina emhlabeni - indlela eya inzuzo
Ngemva kokuhlola izici eziyinhloko ezihlobene nendlela yokulondoloza amandla kufanele sibe ibhizinisi, cabangela izici eningiliziwe ukusetshenziswa kukagesi ukukhanyisa zalapho. Ngokwezibalo, mayelana 10% (futhi kwezinye izindawo - ezingaphezu kuka-30% ezimbonini Russian nezitshalo izindleko of ukusetshenziswa kukagesi, kubalulekile ukuba kukhokhelwe izikweletu ngoba ukukhanya.
Yiziphi izindlela amandla okusindisa njengoba isetshenziswa kungakhanyi ukukhanya ukukhanya? Ochwepheshe bakubiza ngokuthi ukhiye eziningana.
Okokuqala, izinhlelo ukukhanyisa ku izimboni kumele kusetshenziswe ngendlela ehluzekile. Asikwazi ukuvumela noma iyiphi ingxenye ifektri ehlanganiswa ama namandla ngaphezu kwezinye izindawo.
Okwesibili, asikwazi ukuvumela ezingeni voltage kagesi kumanethiwekhi yenkampani kwaba ngaphezu kwezihlalo okuzisholo (noma ngezansi). Esimweni sokuqala ukuba ligcwale elekroenergii, okwesibili - okukhiphayo ukukhanya kuyehla, okungaba nomphumela omubi ukusebenza.
Okwesithathu, kuba engathandeki kwabanye ISIZINDA ezintweni ezenzeka kwamabhizinisi ku awunalutho. Kuyadingeka ukusetha wokushintsha kumodi ibhukwana noma othomathikhi, khubaza uphinde unike amandla namaqembu amadivayisi ukukhanyisa. Ukushintsha futhi lula inqubo izinqumo songa amandla kubaluleke kakhulu, ngoba, ngaphezu kokulondoloza ugesi, kukhona ezikhethekile yokukhiqiza imisebenzi.
Kungani sidinga okokufaka aux?
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini abenzi ikhofi. Yikuphi okungcono - ikhofi noma ikhofi?
Gigantic robot humanoid wenza izinyathelo zawo kuqala
Ukuphepha Business kubaluleke kakhulu ukuhlela ukubhekwa
Uyini ngalé? Lo mqondo ihlobene imfashini?
Uyini cherry best for nedlelo? Izinhlobonhlobo efanelekayo eRussia emaphakathi
Russian Public Ithelevishini waqala ukusakaza
Antenna Offset - okungcono TV iziteshi eliphezulu
"Izihlahla ziyafa ngenkathi zimi": isifinyeto somdlalo